မာမီရောက်တဲ့နေ့ ~ စန္ဒကူး
ကျွန်မနေထိုင်သော - ၂
Cash Flow Game Winner
Beauty of Math!!
ကျွန်မနေထိုင်သော - ၁
ခြံဝန်းထဲမှာ - ၁
ရုံးပိတ်ရက်တုန်းက ခြံဝင်းထဲမှာဟိုလျှောက်ကြည့်ဒီလျှောက်ကြည့်နဲ့ တစ်နေရာအရောက်မှာတော့ ပန်းပင်တွေကြားမှညှပ်ပြီးပေါက်နေတဲ့ငရုတ်ပင်တစ်ပင်၊ အသီးတွေကလဲအများကြီး။ဒါနဲ့ ကျွန်မ လက်ကကင်မရာနဲ့ဖုန်းကိုအောက်ချ၊ ဘေးနားကိုကြည့် (ဥယျဉ်မှူး) တွေတွေ့မှာစိုးလို့၊ မခူးလို့ မရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊တော်ကြာအရိုသေမတန်မှာစိုးလို့။ အပင်ကိုဆွဲနှုတ်တာ၊ တော်တော် ခက်ခက်ခဲခဲကိုနှုတ်ရတယ်။ ချွေးတွေလဲထွက်၊ နေပူပူအောင်မှာ။ ဘာလုပ်ဖို့လဲသိလား။ ကျွန်မ နောက်မှာခြံလေးလုပ်ထားတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီမှာ မျိုးစေ့လေးတွေကြဲထားတာအခုထိကို အပင်မပေါက်ဘူး။ ဒါကြောင့်အဲဒီငရုတ်ပင် အသီးသီးပြီးသားကိုမြေတူးပြီးသွားစိုက်ထားမလို့။ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ဘေးက သူတွေကအံ့သြကြတယ်။ ဟာ..ရုတ်တရက်အပင်ကကြီးလာပြီး အသီးတွေတောင်သီးလို့ဆိုပြီး။ဟားဟား…..
း( အခုတော့အပင်ကအသီးတွေနွမ်း၊ အရွက်တွေခြောက်လို့၊ ဇွဲမလျှော့သေးဘူး။ ရေတော့ဆက် လောင်းနေတုန်းဘဲ။ မမခိုင် တော့ပြောပါတယ်။ရေသောက်မြစ်ထိသွားလို့နေမှာတဲ့။ ကျွန်မကတော့ အရွက်တွေနွမ်းရင်ကြွေသွားပြီး အသစ်တွေထွက်လာမယ်လို့မြော်လင့်တုန်းဘဲ။
မနေ့ညကစောစောအိပ်တယ်။ မောင်လေးကမာမီနဲ့ ဦးဦး ထွက်လာပြီတဲ့။ ညီမလေးက ဘန်ကောက် ကနေဆက်ထွက်သွားပြီတဲ့။ လေယဉ်ကမနက် ၅း၂၅ ဆိုက်မှာဆိုတော့ ၄း၀၀ နာရီ လောက်ကတည်းကထပြီးပြင်ဆင်၊ အရေးထဲမှာနေလို့သိပ်မကောင်းဘူး။ ညီမ၀မ်းကွဲမိသားစု ရောက်လာတော့ကျွန်မလဲညအိပ်ဝတ်အိကျီကိုအပေါ်က ကုတ် တစ်ထပ်ထပ်ဝတ်ပြီးလေယဉ်ကွင်း ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ ကားပေါ်တက်တက်ခြင်းဘဲ ကားမှာတပ်ထားတဲ့ air freshner အနံ့ က ဦးနှောက်ထဲအထိကိုတိုးဝင်ပြီး ခေါင်းကမူးဝေေ၀ဖြစ်နေပြီ။ တစ်နာရီကျော်လောက်သွားရတာဆို တော့တူတော်မောင်လေးလဲခေါင်းမူးပြီးအန်ရော။ အဲဒီအနံ့တွေပါပေါင်းပြီး ကျွန်မခေါင်းကိုက်ပါပြီ။ တူမောင်မျောက်လောင်းလေးလဲသနားပါတယ်သူ့ခမျာအိပ်ချင်မူးတူးနဲ့။ လေယဉ်ကွင်းရောက်တော အချန်ဇယားကိုကြည့်လိုက်တော့delay တဲ့။ ၇း၁၅ မှဆိုက်မယ်ဆိုတော့ စောင့်ပေတော့အကြာကြီ့း နောက်တော့ မာမီနဲ့ ဥဥကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီက TV ကနေလှမ်းကြည့်နေတော့ သူတို့မှန်းသ တိမထားမိဘူး။ hot shot တွေဖြစ်နေကြသကိုး။ ဟိဟိ
အခုတော့မာမီချောချောမောမောနဲ့ ကျွန်မဆီကိုရောက်လာပါပြီ။ အရင်ဆုံးပါလာတာထုတ်တော့ ဆေးတွေ အိတ်တစ်ဝက်လောက်ရှိမယ်။ မနဲဘူး။ ပြောရင်ရီရမယ်၊ သူက ကျွန်မသွေးတိုးရှိတော့ ဒန့်သလွန်ပင်ပေါက်ကိုသယ်လာမလို့အဖေကအတင်းတားပြီးမသယ်ခိုင်း။အဲဒီတော့ ဒန့်သလွန်သီး ကိုပါးပါးမသိအောင်သယ်လာတယ်။ အစိမ်းနော်။ အမှန်တော့ဒီမှာဒန့်သလွန်ပင်တွေက အလေ့ကျ ပေါက်ပင်တွေလိုဖြစ်ပြီးဒန့်သလွန်သီးတွေလဲဈေးမှာအများကြီ။ ပြီးတော့ချဉ်ပေါင်ရွက်အစိမ်းတွေ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်။ အသားကြော် တွေ၊ ငခြောက်ကြော်၊ ငပိ၊ ငါးဖယ်ဆုပ်ကြော်၊ အိုး…အစုံဘဲ။ ကြွားတာမဟုတ်ဘူးနော်…ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ တော့ပစ်တုန်းက နှစ်ချို့တဲ့ဟာတွေသိမ်းထားတာ လားတဲ့။ အမှန်က ဒီဇင်ဘာမြန်မာပြန်တုန်းကသယ်လာတာပါ။ အခုတော့ကုန်သလောက်ရှိနေပြီ။ ဒါပေမယ့်အခုထပ်ရောက်လာပြီ။ ကာဘောလစ် ဆပ်ပြာတောင်ပါသေးတယ်။ ကာဘောလစ် က ဒီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအရမ်းကြိုက်ကြတယ်။ သုံးလိုက်ရင်မျက်နှာမွတ်သွားတာဘဲတဲ့။ ဟုတ်မ ဟုတ်တော့မသိဘူး. စမ်းကြည့်ရအုံးမယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံထွက် ကိုယ်ကမသိတော့ သိသူဖော်စား မသိသူကျော်သွားမျိုးတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလေ…ဟုတ်တယ်ဟုတ်…